DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah ee SD oo noqday midka 2-aad ee ugu wayn Sweden (Soomaalida oo ka walaacsan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah ee SD oo noqday midka 2-aad ee ugu...
DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah ee SD oo noqday midka 2-aad ee ugu wayn Sweden (Soomaalida oo ka walaacsan)
(Stockholm) 26 Sebt 2019 – Xisbiga soo galooti diidka ah ee Sverige Demokraterna ayaa noqday xisbiga 2-aad ee ugu wayn Sweden, sida ku cad sahan cusub oo ay Novus u sameeysay hilinka SVT. Xisbiga SD ayaa sidoo kale noqday xisbiga 1-aad ee raggu xiiseeyaan.
SD ayaa sahankan ka helay 20.7%, taasoo 2.3 boqolkiiba ka badan qiimayntii hore, waxaana kaliya ka horreeya Xisbiga Social Demokraterna oo urursaday 24.7%.
SD ayaa sidoo kale aad ragga usoo jiitey, waxaana taageersan 26.6%, halka Social-ku ay codadka raga ka heleen 22.4%, taasoo in aad u yar ka badan Moderat-ka oo kasbaday 22.1%.
Dhanka haweenka aad bay ugu liitaan oo waxaa SD taageeray 14.7%, taasoo aad uga hooseeysa Social-ka oo ah 26.9%, halka uu M helay 18.6%. Waxaa qiimayntan la sameeyay intii u dhaxaysey 26-kii Agoosto 26 ilaa 22-kii bishan Sebtember.
Xisbigan ayay aalaaba il gaar ah iskaga eegtaa Soomaalida Sweden, maadaama uu yahay xisbi aan jeclayn dadka soo galootiga ah ee aan asal Swedish-ka ahayn.
Previous articleDHEGEYSO: Shirkad Swedish caan ah oo lagu helay MUSUQ aad u baahsan! (Meelaha ay saamaysay & balaayiin ay isku difaacayso)
Next articleDAAWO: Madaxwaynaha Somalia oo caddeeyay moowqifka Somalia ee dacwadda badda